काठमाडौको निषेधाज्ञाले मजदुर भोक भोकै सडकमा ! कता गयो सरकार ? - Sacho Post
२०७७ भाद्र १४, आईतवार ०३:४५ बजे
काठमाडौ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न जारी गरिएको बन्दाबन्दी हटेपछि विस्तारै कामको खोजीमा लागेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर निषेधाज्ञा शुरु भएसँगै पुनःसडकमा आउन थालेका छन् । बजार सबै बन्द भएर कामविहिन भएपछि बाध्यताबस भोक मेटाउन बाध्यताबस सडकमा अउनु परेको मजदुरको दुखेसो छ । काठमाडौँको रत्नपार्कस्थित बसपार्कमा साँझको समयमा झण्डै पाँचदेखि सात सय मजदुर खाना कै लागि भेला हुने गरेका छन् ।
सडकमै भेटिनुभएका होटल मजदुर पूर्णप्रसाद पाण्डेलाई विगतमा खानाको दुःख थिएन । बागबजारको होटलमा खाना पकाउने उहाँ होटल बन्द भएपछि कामविहिन हुनुभयो । उहाँ पनि संस्थाले दिएको खाना खान रत्नपार्कमा आउनुहुनछ । शनिबार खानाको लाइनमा बस्नुभएका पाण्डेले अन्य क्षेत्रमा पनि मजदुर भोकभोकै रहेको बताउनुभयो । थाहा पाएका निकै टाढाबाट खाना खान यहाँ आइपुग्छन् ।
त्यस्तै पी’डा काठमाडौँमा १२ बर्षदेखि भारी बोक्दै आउनुभएका सिन्धुपाल्चोकका कुमार श्रेष्ठको पनि छ । कोरोनाले गर्दा काम पाउन नसकेको दुखेसो गर्ने श्रेष्ठ पनि अहिले सडकमा काम विहिन हुनुहुन्छ । कहिलेसम्म खानाको लागि सडकमा भौतारिनुपर्ने हो भनेर उहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ ।
विगतमा सरकारले चैत ११ बाट बन्दाबन्दी लागु गरेको थियो । त्यसको अर्को हप्तामा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई सरकारले खाना खुवाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयमा विभिन्न संस्थाले समेत साथ दिए । ठाउँठाउँमा भोजन गराएर भोकाहरुको पेट भर्ने वातावरण मिलेको थियो । बीचमा बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै आएपछि उनीहरुलाई सरकारले काम दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कतिपय स्थानीय तहले लागू गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । कोभिड–१९ को स’ङ्क्रम’ण जोखिम भएको भन्दै उक्त खाना खुवाउने अभियानलाई सरकारले नै निरुत्साहित ग¥यो ।